Cusboonaysiinta Metamask: Kala beddel silsiladda 'Binance Smart Chain' oo si toos ah uga socota jeebka Metamask - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Cusboonaysiinta Metamask: Kala beddel silsiladda 'Binance Smart Chain' si toos ah boorsada Metamask
Tag: Chain Binance Smart, Metamask, Isku beddel, Shabakadda silsiladda 'Binance Smart Chain Network', isweydaarsiga calaamadda
Waqtiga akhriska: <1 daqiiqo
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Metamask waxay nolosha u fududeyneysaa kuwa jecel Binance Smart Chain: hadda waa suurtagal in si toos ah looga beddelo astaamaha miiska ama jeebka moobiilka. Aaladda isweydaarsiga ayaa isku daraysa xogta ka soo ururinta isku-dhafka sarrifka, kuwa sameeya suuqyada iyo DEXs si loo hubiyo inaad ku hesho qiimaha ugu fiican ee khidmadaha ugu hooseeya ee shabakadda.
Metamask, boorsada ugu fiican ee loo yaqaan 'DeFi'
Furaha isku-beddelka, oo ka hooseeya isku-dheelitirnaanta jeebka, wuxuu hubiyaa inaad had iyo jeer marin u hesho xulashada ugu ballaadhan ee astaamaha iyo qiimaha ugu tartanka, adoo ka bixinaya qiimayaasha isu-geeyayaal badan iyo shakhsiyaad suuq sameeya hal meel. Khidmadda adeegga ee 0,875% waxaa si otomaatig ah loogu dhisaa xigasho kasta, oo taageerta horumarka joogtada ah si looga dhigo MetaMask xitaa ka sii wanaagsan.
Isku beddelka furaha ee gudaha Metamask, markii lagu xidho Smart Chain
Metamask runti waa boorsada ugufiican ee DeFi. Hadaan uun haysto waqti aan ku dhammeeyo maqaalkaas .. ..
Waxaad u baahan tahay inaad ka bedesho Binance Smart Chain una wareejiso Binance oo leh metamask. Waxaad isticmaali kartaa buundada Binance. Waad heleysaa sidoo kale lagu sharaxay halkan.
Maqaalka horeWaa maxay Binance Smart Chain, sidee buu ula xiriiraa Metamask